जन्मदिनमा गंगाले ल्याए देशभक्तिपूर्ण गीत’ (भिडियो) « Lokpath
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीको नेता तथा गीतकार गंगानारायण श्रेष्ठ (मानव)ले आफ्नो जन्मदिनकै दिन नयाँ गीति भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
गीत हाइलाइट्स नेपालको युट्युब च्यानलमा गीत उपलब्ध छ ।
प्रकाशित मिति: २०७७,फाल्गुन,१०,सोमवार १०:३८
काठमाडौं- लोकपथ टिभीले हरेक दिन टप १५ ‘हेडलाईन्स् ‘ प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस समाचार बुलेटिनमा दिनभरको खबर समेटिएको हुन्छ।
कोरोना संक्रमणका बेला कस्ता खानेकुरा खाने ? पोषणविद् थापासँगको कुराकानी (भिडियोसहित)
काठमाडौं । हामी अहिले कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरसंग जुधिरहेका छौँ । अहिलेको संक्रमणको दर पहिले भन्दा ६ गुणा बढी भएको
काठमाडौं- नेपालकी चर्चित अभिनेत्री हुन्, प्रियंका कार्की । धेरैको मन मुटुमा बस्न सफल यी अभिनेत्री बेलाबखत विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहन्छिन्।
अमेरिकी चिकित्सकको सल्लाहः नेपालले कोरोनाको दोस्रो लहरलाई यसरी रोक्न सक्छ (भिडियो सहित)
अमेरिकाका विगत ७ बर्ष देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय रहेका डा. मुनिश शर्माको विशेषज्ञता पल्मनरी क्रिटिकल केयर (छाती र सघन उपचार